Agriculture - Mero Khabar -
खसी बाख्राबाट मनग्य आम्दानी
पथरी (मोरङ), ५ साउन । उन्नत जातको खसी बोका बिक्रीबाट किसानले मनग्य अम्दानी गर्न थालेका छन् । दुई वर्ष अगाडीे दर्वेशा गाविसमा स्थापित सावित्रा बाख्रा फार्मले २०० वटा खसी बाख्रा तथा पाठापाठी उत्पादन गरेको छ । सुरुमा १० वटा खसी बोका पालन गरी सुरु गरिएको सो फार्ममा अहिले उन्नत जातको जमुनापारी, जामुन क्रश, बङ्गाली, बारवडी, बोयर तथा अन्य जातका खसी बाख्रा रहेका सञ्चालक फणिन्द्र सुवेदी बताउनुहुन्छ । उहाँले एक बिगाहा जमिनमा ५०० खसी बाख्रा अटाउने सातवटा खोर निर्माण गर्नुभएको छ । दुई वर्षमा रु ३० लाखभन्दा बढी आम्दानी भएको सुवेदीको भनाइ छ । सो फार्ममा पालिएका खसी...
कुखुराको चल्लासहित भारतीय पक्राउ
रौतहट, ४ साउन । गौरस्थित प्रहरीको टोलीले गए राति सीमावर्ती क्षेत्रबाट ठूलो परिणाममा कुखुराको चल्लासहित तीन भारतीय भरियालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी बङ्कुलका प्रहरी निरीक्षक शिवशङ्कर शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार राति ९ बजे गौर– २ नरकटिया गाउँ नजिकबाट बाकसमा राखिएका एक हजार ५७५ चल्लासहित अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा भारत मोतीहारीका ३० वर्षीय जिमदार यादव, १६ वर्षीय अनिल यादव र २० वर्षीय धर्मेन्द्रकुमार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गरिएका चल्ला आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरको प्राङ्गणमा खाल्डोमा पुरिएको छ ।...
बाढी पहिरोले करोडौँको क्षति, गोठालासहित २०० बाख्रा बेपत्ता
मुगु, ३ साउन । चार दिनयता लगातार पानी पर्दा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो गई करोडौँको सम्पत्ति क्षति भएको छ । शुक्रबार राति परेको वर्षाले मुगु कर्णालीमा बाढी आउँदा माग्री गाविस–४ छाइलको गाठे भन्ने स्थानमा रहेका तीन वटा पसल बगाएको छ । बगेका पसल सोही गाउँका धनबहादुर बुढा, जङ्गवीर रोकाया र वीरसिंह बुढाका हुन् । पसलको पूर्वपट्टि रहेको चिमात खोलामा आएको बाढी पसलतिर आएपछि तीन वटा घरसँगै पसलमा रहेका लाखौँ सामान बाढीले बगाउँदा तीनै जना घर न घाटका भएका छन् । शनिबार दिउँसो परेको पानीले माग्री–१ चिमाथको जङ्गलमा पहिरो जाँदा भेडाबाख्रा चराएर फर्कंदै गरेका...
रु सात अर्बको कृषिजन्य वस्तु उत्पादन
इलाम, ३ साउन । इलाममा यो वर्ष रु सात अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार अलैँंची, अदुवा, आलु, ओलन, अमिृसो, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी गरी रु सात अर्ब १६ लाख ५२ हजार बराबरको उत्पादन भएको हो । उत्पादित कृषिजन्य वस्तु झापाको काँकडभिट्टा हुँदै भारत, बङ्गलादेश लगायतका देशमा निर्यात गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाशमणि काफ्लेका अनुसार आलुबाट रु दुई अर्ब २७ करोड ९० लाख ४० हजार, अदुवाबाट रु दुई अर्ब २० करोड ७७ लाख अलैँंचीबाट रु एक अर्ब पाँच करोड ५५ लाख, विभिन्न तरकारीजन्य वस्तुको बिक्रीबाट रु एक...
तरकारी खेतीको लागि ७२ लाख
सप्तरी, १ साउन । तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन र किसानको सीपको विकासका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आव २०७२÷०७३ मा रु ७२ लाख प्रदान गरेको छ । जिल्लाको विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण गरिएको रकमको सदुपयोग, कृषिको उत्पादन, लघु तथा साना सिँचाइ व्यवस्थाको अनुगमनको क्रममा उक्त रकम वितरण भएको कार्यालय प्रमुख भगिरथ यादवले जानकारी दिनुभयो । वितरण गरिएको रकमअन्तर्गत तरकारी बाली युवा स्वरोजगार कार्यक्रमतर्फ रु ३६ लाख, साना सिँचाइतर्फ रु ३३ लाख तथा सहकारीतर्फ रु तीन लाख सम्बन्धित किसानलाई वितरण गरिएको बताइएको छ । उक्त रकम प्राप्त गरेका किसानले उच्च...
बाख्रापालनबाट यथेष्ठ कमाइ
बागलुङ, १ साउन । जिल्लाको भकुण्डे–२ का युवा मनोज थापाले बाख्रापालनलाई व्यावसायिक बनाउनुभएको छ । थापाको ‘फार्म’मा अहिले १५ वटा बाख्रा छन् । अघिल्लो वर्षसम्म थापाकोमा एक÷दुई बाख्रा मात्र हुने गर्थे । विदेश जाने सपना त्यागेर थापाले कृषि र पशुपालनलाई पेसाको रुपमा अँगाल्नुभएको छ । “बाख्रापालनलाई मुख्य पेसाका रुपमा अघि बढाउने सोचमा छु, एक वर्षभित्र ५०÷६० वटा बाख्रा पु¥याउने लक्ष्य छ” थापाले भन्नुभयो । छ महिनाको अवधिमा बाख्रा बेचेर रु ५५ हजार आम्दानी गरेको उहाँको भनाइ छ । ६÷७ महिनाको बोका रु १२ देखि १५ हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । “बाख्रा...
मुलुकभरका अलैँची व्यवसायी हलेसीमा
खोटाङ, ४ फागुन । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो अधिवेशनका लागि मुलुकभरका व्यवसायी खोटाङको हलेसीमा भेला भएका छन् । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो साधारणसभा तथा दोस्रो महाधिवेशनको सिलसिलामा मुलुकभरका अलैँची कृषक र व्यवसायी खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल हलेसीमा भेला भएका हुन् । ‘कृषि वस्तुको पहिचान, हाम्रो साझा अभियान’ भन्ने नारासहित महासङ्घको अधिवेशनमा सहभागिताका लागि खोटाङलगायत ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, दोलखा, काभ्रे, गोरखा, लमजुङका अलैँची व्यवसायी आइपुगेका छन् ।&...
जुम्लाको सिमी र फापर काठमाडौमा
जुम्ला, १ फागुन । नेपाल खाद्य संस्थान जुम्ला शाखाले माघ महिनामा रु ३४ लाख ५५ हजारको बराबरको सिमी र फापर काठमाडौँमा निर्यात गरेको छ । एक सय ५० क्विन्टल सिमी र १४० क्विन्टल फापरलगायतको खाद्यन्न पहिलो चरणमा राजधानी पठाइएको शाखा कार्यालयका प्रमुख पूर्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले फागुनमा पनि सो शाखालाई २५ क्विन्टल सिमी र ४० क्विन्टल फापर खरिद गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ । उहाँले किसानबाट ती खाद्यान्न खरिद गरिरहेको छ र आफ्ना उत्पादन विक्री गर्न किसानको आइरो लागिरहेको वताउनुभयो । तर कोटा निश्चित भएकाले सबै किसानले आफ्नो...
अब हरेक कृषकले पेन्सन पाउने
पथरी (मोरङ), २४ माघ । कृषकका लागि निवृत्तीभरण(पेन्सन) को व्यवस्था गर्न लागिएको कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले बताउनुभएको छ । विराटनगरमा सुरु भएको नवाँै राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला २०७२ को आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री गजुरेलले कृषिको विकासका लागि मन्त्रलायले किसानको वर्गीकरण गरेर पेन्सनको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले किसान व्यवसाय नै छाडेर विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्थालाई रोक्न सरकारले विशेष योजना ल्याउन लागेको बताउँदै कृषिमा ठूला फार्म निर्माणका लागि पानी, बिजुली तथा अत्यावश्यक सुविधा दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । रासस ...
अज्ञात रोगले सोह्र पशुचौपाया मरे
बैतडी, २४ माघ । अज्ञात रोगका कारण बैतडीमा पशुचौपाया मर्न थालेका छन् । जिल्लाको डिलासैनी, देहिमाण्डौ र गुरुखोला गाविसमा एक हप्तामा १६ पशुचौपाया मरेका हुन् । डिलासैनी वडा नं ६ मा १३ वटा बाख्रा मरिसकेका छन् भने देहिमाण्डौ र गुरुखोलामा तीनवटा भैँसी मरेका छन् । बाख्रामा झोक्रिने, मुखबाट ¥याल निकाल्ने, फनफनी घुम्ने लक्षण देखापर्ने गरेको डिलासैनीका स्थानीयवासी करन धामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “बाख्रामा यस्तो रोग देखापरेको दुई÷तीन दिनमै मर्ने गरेका छन् ।” बाख्रा दिनानुदिन मर्न थालेपछि डिलासैनीमा रहेको पशु उपसेवा केन्द्रमा जानकारी गराउँदा...
चितवनमा एउटै बाख्राले छवटा पाठापाठी जन्मायो !!
रत्ननगर (चितवन), १६ माघ । चितवनको भरतपुरमा एउटा बाख्राले स्थानीयलाई आश्चर्यमा पार्दै छवटा पाठापाठी जन्माएको छ । तीनवटासम्म पाठा जन्माएको कहिलेकाहीँ सुनिने भएपनि छवटा जन्माएको भने दुर्लभ मानिन्छ । भरतपुरस्थित कृष्णपुरका किसान आनन्द अधिकारीले पालेको बाख्राले छवटा पाठापाठी जन्माएको हो । चारवटा पाठा र दुईवटा पाठी जन्माएको किसान आनन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि पहिलो बेतमा तीनवटा, दोस्रोमा दुईवटा र तेस्रो बेतमा चारवटा पाठापाठी जन्माएको बाख्राले योपटक छवटा जन्माएपछि गाउँमा बाख्रा हेर्नेको भिड लागेको अधिकारीले बताउनुभयो । आज मध्याह्न १२ बजे...
कृषि विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने
चितवन, १४ माघ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले कास्कीको पुरनचौरमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयको आफ्नै क्याम्पसबाहेक आङ्गिक रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको यो पहिलो हो । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन समेत हालसम्म कुनै क्याम्पसलाई दिएको छैन । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालकाअनुसार यसै शैक्षिक सत्रमा पुरनचौरमा जनस्तरबाट आर्थिक सङ्कलन गरी कृषि विषय पढाउनका लागि खोलिएको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजमा कृषि स्नातकमा ५० जना विद्यार्थी पढाउने तयारी भएको छ । यसवर्ष रामपुरमा कृषि...
कृषि विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुरायबापत पत्रकार बस्नेत सम्मानित
काठमान्डौ, ८ माघ / पत्रकारिताको माध्यमबाट कृषि विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुरायबापत पत्रकार सूर्य चन्द्र बस्नेतलाई नेपाल राष्ट्रबैङ्कका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले सम्मान गरेकाछन । बस्नेतलाई मिडिया इन्टरनेश्नलले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि कर्जा विशेष कार्यक्रम’मा कृषि विकाशमा योगदान पुरायबापत सम्मानित गरिएको हो । बस्नेत राष्ट्रिय समाचार समितिमा प्रमुख समाचारदाता तथा बोर्ड सदस्यको रूपमा कार्यरत छन् । ...
कत्रो ठुलो मुला !!!
खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा आयोजना गरिएको सातौं बृहत कृषि मेला प्रदर्शनीमा आफूले फलाएका मुला देखाउँदै वृद्ध कृषक । तस्बिर ः केदार मगर÷खोटाङ ...
दसैँको बेलामा किसानलाई धान काट्न भ्याइनभ्याइ
भक्तपुर, ६ कात्तिक । नेपालीका घरघरमा दसैँको रौनकताले छाएपनि भक्तपुरका किसानलाई भने धान काट्नको चटारोले भ्याइनभ्याइ भएको छ । दसैँको टीका लगाउन जाने हतारोसँगै यहाँका किसान धान भित्र्याउन व्यस्त देखिन्छन् । असिना पानी परेर पाकेको धान झार्ला भन्ने डरले दसैँको पर्वाह नगरी धान काट्न व्यस्त भएको नगरकोट नगरपालिका ताथली–३ की साबित्री बस्नेतले बताउनुभयो । दसैँमा आफन्तको हातको टीका लगाउन पनि पर्ममा भएकाहरुले नगई नहुने ठाउँमा मात्रै पालो गरेर जाने र अरुले धान भित्र्याउन खेतमा जाने गरी पर्ममै मिलाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुहुन्छ, ‘‘आकाश...